I-B&B Pottery - indawo evulekile esophahleni lwendlu ye-studio - I-Airbnb
I-B&B Pottery - indawo evulekile esophahleni lwendlu ye-studio
Geldrop, North Brabant, i-Netherlands
Indlu yami ewumkhathi kusukela ngo-1932 itholakala eduze nenkaba ye-Het Brabantse Geldrop. Isitezi esine-attic evulekile sinefenisha ukuze uhlale kahle. futhi esimweni sezulu esihle ungasebenzisa futhi ithala lengadi yangasese.
Indawo iyisisekelo esihle sohambo lwedolobha, uhambo lokuhamba ngezinyawo nokuhamba ngebhayisikili eNyakatho Brabant, Limburg, Belgium, Germany. Centre Eindhoven 5 km, isikhungo Geldrop phakathi nokuhamba ibanga. Ukukhetha okubanzi ezindaweni zokudlela ezinhle nezitolo.
Indawo yokupaka yamahhala, izithuthi zomphakathi eziseduze, amabhayisikili engadini.
Isitezi se-attic evulekile ngokumangalisayo futhi ekhanyayo sitholakala esitezi sesi-2 sendlu endala kusukela ngo-1932.
Okwenza isikhala sikhetheke kakhulu ukhakhayi oluphakeme lwamamitha angu-6, ukukhanya nophahla olwehlelayo olunemishayo ebonakalayo, emidala. I-decor ingeyakudala/yesimanje.
Ngaphezulu kwendawo yokulala ephansi kunendawo ephakeme evulekile (enezitebhisi ezingaguquki). Lena indawo yothando kodwa futhi enengozi yokulala abantu abangu-2. Amafasitela amaningi anikeza ukukhanya okuhle, ngezinsuku ezifudumele angavulwa ngokuphelele, ucishe ubonakale uhlezi ngaphandle. Igumbi linomoya omuhle. I-air conditioning ayitholakali, abalandeli bakhona.
Ukulala: 4 x ibhokisi lombhede wasentwasahlobo, 1 x umbhede ophathwayo.
Amabhati: Igumbi lokugezela langasese elinebhavu, ishawa, indlu yangasese, izitsha zokugezela
Indawo yokuhlala: indawo yokuhlala/indawo yokuhlala enosofa/izihlalo ezingalweni, i-TV, indawo yomlilo evalwe ngezinkuni.
Ukudla: ikhishi, isiqandisi, i-microwave, isitofu sikagesi esingabasi ama-2 + indawo yokuphuzela utshwala, imishini yekhofi/yetiye, izitsha.
Vide: uxhumano endaweni yokuhlala ephansi ye-B&B ngokusebenzisa a izitebhisi.
Ingadi: ingadi yezivakashi ecezile enetafula lokudlela, i-bbq, izitsha zobumba, indawo yomlilo yangaphandle nesihlalo sokuphumula (amabhayisikili angapakwa lapha).
Ngokubonisana, ikhishi elizimele eliseduze elingaphansi lingasetshenziswa.
1 umbhede omkhulu, Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, 1 umbhede wosofa, 1 usofa
ubusuku obungu-7 e- Geldrop
I-B&B Pottery ingaphakathi kwebanga lokuhamba enkabeni yedolobhana laseGeldrop. Ezikhathini zangaphambili, cishe ngo-1900, imboni yendwangu yayibaluleke kakhulu ku-Geldrop. Izimvu, i-heather kanye nabaluki basekhaya bakha isisekelo salokhu. AbakwaThuiswevers bahamba nezinto zabo bedlula e-Katoenpad benqamula emahlathini ukusuka e-Mierlo kuya e-Geldrop lapho zacutshungulwa kwenye yezimboni eziningi.
Lapho manje uzothola izinhlobonhlobo zezitolo, izindawo zokudlela, amasimu namathilomu kusuka kubhajethi kuya kokukhethekile. Futhi phakathi nebanga lokuhamba kukhona i-Geldrop Castle enepaki elihle, indawo yezilwane ezifuywayo kanye neKasteelhoeve ukuze uthole ukudla okulula nesiphuzo. Inqaba ingavakashelwa.
Ukuqhubeka kancane, kodwa njalo phakathi kwamakhilomitha ambalwa, sivikele izindawo zehlathi nezempilo ezinemizila emifushane noma emide yokuhamba ngamabhayisikili kanye nekhefi ethokomele ye-Heide.
I-Geldrop : I-Weaving Museum, i-Geldrop Castle, i-Dierenrijk, i-Roof of Brabant, i-t Nupke mill, ukuhamba kwezingane u-Het Katoenpad.
Indawo yokusebenzela yegumbi lokuhlala yebhizinisi letafula, indawo yokusebenzela i-Riel, i-div. Iziqiwi ezihlanganisa iStrabrechtse Heide, sauna Spasense.
Eindhoven: idolobha lokuthenga, Dutch Design Week, Glow, van Abbe Museum, ezemidlalo, ubuchwepheshe, ukuphuma, Strijp S, Natlab, Klokgebouw amaphathi, Effenaar amakhonsathi, Muziekgebouw, Parktheater, Beursgebouw, carnival.
Maduzane uzothola amadolobhana amahle njengeNuenen, Vincentre; indawo yokufunda yonke into ngoVincent van Gogh, uMerlo isigodi samacherry, iHeeze enesikhungo esihle sedolobhana kanye neHeeze Castle, ukuthenga, ukuhamba ngezinyawo, iLeende njll njll.
I-B&B Pottery iyingxenye yendlu yesitudiyo. I-Indoor Living Room Atelier for Table Business inikezela ngezindawo zokusebenzela zobuciko zokupenda izitsha. Izivakashi zethu ze-b&b zamukelekile ukusebenzisa izinkundla zokucobelelana ngolwazi; livingroomatelier.nl
Nginikeza ukuxhumana okuningi nezivakashi ngendlela ezifisa ukuba nakho. Ngesikhathi sokuhlala kwezivakashi, omunye wabahlali uzohlala ekhona.
I-B&B Pottery iyingxenye yendlu yesitudiyo. I-Indoor Living Room Atelier for Table Business inikezela ngezindawo zokusebenzela zobuciko zokupenda izitsha. Izivakashi zethu ze-b&b z…
Hlola ezinye izinketho ezise- Geldrop namaphethelo